နာမညျကွီး အနုပညာရှငျတှကေို ခံဝနျထိုးခိုငျးနတေဲ့ ကိစ်စရပျနဲ့ ပကျသကျပွီး ဖှငျ့ဟလာတဲ့ ဒါရိုကျတာ သညျခတျေနေ - Pyit Time Htaung
လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ နိုငျငံရေးအခွေ အနတှေနေဲ့ပကျသကျပွီး အနုပညာ ရှငျတှအေတျောမြား မြားလညျး ဖမျးဆီးခံထား ရသလို ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖှငျ့အေ ရးယူခံထားရတဲ့သူေ တှလညျး အမြားအပွား ရှိနတောဖွဈပါတယျ။
အခုလို အခွအေနတှေကွေောငျ့ အနုပညာရှငျ အတျောမြားမြားလညျး ရှောငျတိမျးနရေပွီး မိသားစုနဲ့တကှဲတပွား စီနနေရေတာပါ။ အနုပညာရှငျတှကေို နိုငျငံရေးအခွအေနတှေနေဲ့ပကျသကျပွီး speak outမလုပျဖို့အတှကျ ခံဝနျထိုးခိုငျးနတေဲ့ ကိစ်စ တဈခုဖွဈပျေါနတေယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
ခံဝနျထိုးခိုငျးနတေဲ့ ကိစ်စရပျနဲ့ ပကျသကျပွီး ဖှငျ့ဟလာတဲ့ ဒါရိုကျတာ သညျခတျေနေ
ဒီအကွောငျးအရာ ကို ဒါရိုကျတာ သညျခတျေနေ က သူ့ရဲ့ Facebook စာမကျြနှာမှာ “ခုတလော နာမညျကွီးနတေဲ့ ခံဝနျကိစ်စ ခံဝနျထိုးပွီးငွိမျငွိမျလေးနလေိုကျတော့ တဲ့! ခှေးကငျြ့ခှေးကွံ လာပေးသလိုပဲ !တနညျးအားဖွငျ့ပွောရရငျ စဈအစိုးရ အတှကျ…စောကျပေါကျတှပေိတျ သှားအောငျစတေနာလိုလို နဲ့ဂငျြးပွုတျရညျတိုကျတဲ့ ဒလနျအကွံပဲ။
ခံဝနျထိုးတယျဆိုတာ… ကြှနျတျော/ကြှနျမ အမှားလုပျ ခဲ့မိပါတယျ။နောငျ မဖွဈစရေပါဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျရတယျ။ နဂိုတညျးကမှ ယုံကွညျခကျြဟာ “ပွားကိုးဆယျ”မပွညျ့တဲ့ လူတဈခြို့ အတှကျကတော့ ခံဝနျထိုးခငျြ ထိုးမှာပေါ့။
“ခံဝနျကိစ်စ လိုကျလုပျပေးနတေဲ့ လူစာရငျးနဲ့ကုမ်မဏီစာရငျးတှေ၊ လကျရှိခံဝနျထိုးပွီးသှားတဲ့ လူစာရငျးတှထေဲမှာ…..ဘယျသူတှပေါနလေဲသာမွငျရငျ အံ့ဩသှားကွ ပါလိမျ့မယျ။ တဈနတေ့ ဈယောကျနှုနျး နဲ့ နာမညျကို ပဟဠေိဝှကျသလို ထုတျပွောပွလိုကျရငျကောငျးလမေလား ?
မကွောကျပါနဲ့ ! ဗိုလျအောငျဒငျဘောငျးဘီခြှတျတာ ဘာဆိုလားပဲ သညျခတျေနေ…..CoupFailed….” ဆိုပွီးရေး သားထားခဲ့ပါတယျ။ ခံဝနျထိုးတဲ့ အနုပညာရှငျတှကေို ပရိသတျတှေ အတျောမြားမြား ကလညျး သိခငျြနကွေပွီး သညျခတျေနရေဲ့ ပို့ဈအောကျမှာလညျး မှတျခကျြအမြိုးမြိုးေ ပးထားကွတာတှရေ့ပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေ အနေတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး အနုပညာ ရှင်တွေအတော်များ များလည်း ဖမ်းဆီးခံထား ရသလို ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်အေ ရးယူခံထားရတဲ့သူေ တွလည်း အများအပြား ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို အခြေအနေတွေကြောင့် အနုပညာရှင် အတော်များများလည်း ရှောင်တိမ်းနေရပြီး မိသားစုနဲ့တကွဲတပြား စီနေနေရတာပါ။ အနုပညာရှင်တွေကို နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး speak outမလုပ်ဖို့အတွက် ခံဝန်ထိုးခိုင်းနေတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာ ကို ဒါရိုက်တာ သည်ခေတ်နေ က သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ “ခုတလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ ခံဝန်ကိစ္စ ခံဝန်ထိုးပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်တော့ တဲ့! ခွေးကျင့်ခွေးကြံ လာပေးသလိုပဲ !တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် စစ်အစိုးရ အတွက်…စောက်ပေါက်တွေပိတ် သွားအောင်စေတနာလိုလို နဲ့ဂျင်းပြုတ်ရည်တိုက်တဲ့ ဒလန်အကြံပဲ။
ခံဝန်ထိုးတယ်ဆိုတာ… ကျွန်တော်/ကျွန်မ အမှားလုပ် ခဲ့မိပါတယ်။နောင် မဖြစ်စေရပါဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ နဂိုတည်းကမှ ယုံကြည်ချက်ဟာ “ပြားကိုးဆယ်”မပြည့်တဲ့ လူတစ်ချို့ အတွက်ကတော့ ခံဝန်ထိုးချင် ထိုးမှာပေါ့။
“ခံဝန်ကိစ္စ လိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့ လူစာရင်းနဲ့ကုမ္မဏီစာရင်းတွေ၊ လက်ရှိခံဝန်ထိုးပြီးသွားတဲ့ လူစာရင်းတွေထဲမှာ…..ဘယ်သူတွေပါနေလဲသာမြင်ရင် အံ့ဩသွားကြ ပါလိမ့်မယ်။ တစ်နေ့တ စ်ယောက်နှုန်း နဲ့ နာမည်ကို ပဟေဠိဝှက်သလို ထုတ်ပြောပြလိုက်ရင်ကောင်းလေမလား ?
မကြောက်ပါနဲ့ ! ဗိုလ်အောင်ဒင်ဘောင်းဘီချွတ်တာ ဘာဆိုလားပဲ သည်ခေတ်နေ…..CoupFailed….” ဆိုပြီးရေး သားထားခဲ့ပါတယ်။ ခံဝန်ထိုးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို ပရိသတ်တွေ အတော်များများ ကလည်း သိချင်နေကြပြီး သည်ခေတ်နေရဲ့ ပို့စ်အောက်မှာလည်း မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးေ ပးထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted in Cele NewsTagged သညျခတျေနေ
Previous post အနုပညာရှငျတှကေို ခံဝနျထိုးခိုငျးနတေဲ့ ကိစ်စရပျနဲ့ ပကျသကျပွီး ဖှငျ့ဟလာတဲ့ ဒါရိုကျတာ သညျခတျေနေ
Next post ရှာလုံးကြှတျ နီးပါး မီးလောငျသှားခဲ့တဲ့ ကငျးမရှာလေး ရဲ့ နောကျဆုံး ထပျမံသိရှိရတဲ့ သတငျးအကွောငျးအရာမြား